အမေရိကန် နဲ့ ဗြိတိန်ထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တင်သွင်းမှု အီရန် ပိတ်ပင်
09 ဇန်နဝါရီ၊ 2021
COVID 19 အတွက် အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်က ထုတ်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ လုံးဝယုံကြည်စရာ မရှိတဲ့အတွက် အီရန်နိုင်ငံတွင်း မတင်သွင်းဖို့ အီရန်ခေါင်းဆောင်ကြီး Ayatollah Ali Khamenei က သောကြာနေ့မှာ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွေက ကာကွယ်ဆေးတင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်ကြောင်းနဲ့ ဒီနိုင်ငံတွေဟာ တခြားနိုင်ငံတွေကို ထိခိုက်အောင် လုပ်လိုစိတ် မရှိဘူးလို့ မပြောနိုင်ကြောင်းလည်း အီရန်ခေါင်းဆောင်က တွစ်တာမှာ ရေးပါတယ်။
အီရန်နိုင်ငံမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကူးစက်ခံရသူ ၁.၂ သန်းကျော်ရှိပြီး ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးရသူက ၅၆၀၀၀ ကျော်ရှိနေတာပါ။
သူ့ရဲ့ မဟာရန်သူကြီးဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုတွေ ချမှတ်ပြီး ဒီရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေး မရအောင် အတားအဆီးတွေ လုပ်နေတယ်လို့ အီရန်က စွပ်စွဲထားပါတယ်။ ဒီအရေးယူ ဒဏ်ခတ်မှုမှာ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးအတွက် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာ ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာဘဏ်တွေကတော့ ငွေအလွှဲအပြောင်း ကိစ္စရပ်တွေမှာ အီရန်ပါဝင်လာရင် လက်မခံ ကြပါဘူး။ ဆေးဖိုးငွေပေးချေမှုကို အမေရိကန်ဘဏ်တွေကနေ တဆင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ အမေရိကန်ဘက်က တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အီရန်အနေနဲ့ ဒီငွေတွေကို သိမ်းယူမှာ စိုးရိမ်ကြောင်း အီရန်သမ္မတ Hassan Rouhani က ပြီးခဲ့တဲ့ လမှာ ပြောပါတယ်။
Pfizer-BioNTech နဲ့ Moderna အပြင် AstraZeneca-Oxford ကာကွယ်ဆေးတွေ တင်ပို့မှုကို ပိတ်ပင်ကြောင်း အီရန်ခေါင်းဆောင် Khamenei ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ ဒီရောဂါဒဏ် အပြင်းအထန် ခံစားရတဲ့ အီရန်ဟာ ကိုယ်ပိုင် ကာကွယ်ဆေးထုတ်ဖို့ ပြည်တွင်းမှာပဲ လူနဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုကို ပြီးခဲ့တဲ့ လမှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွါးနေတဲ့ မနှစ်က မတ်လထဲမှာ ဒီကပ်ရောဂါအတွက် အကူညီတွေ ပေးမယ်လို့ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် အီရန်ရဲ့. ရန်ဘက်ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အယုံအကြည်မရှိဘူးလို့ ပြောပြီး Khamenei က လက်မခံပယ်ချခဲ့ပါတယ်။
Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ဆေး တသိန်းခွဲ အီရန်ကို ပို့ဖို့ အမေရိကန်အခြေစိုက် အီရန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက စီစဉ်ထားပေမယ့် Khamenei ရဲ့ ပြောကြားချက်ကြောင့် အခု ဖျက်သိမ်းခဲ့ရတယ်လို့ အီရန်လခြမ်းနီအဖွဲ့က သောကြာနေ့မှာ ပြောပါတယ်။
အမရေိကနျ နဲ့ ဗွိတိနျထုတျ ကိုဗဈကာကှယျဆေး တငျသှငျးမှု အီရနျ ပိတျပငျ
COVID 19 အတှကျ အမရေိကနျနဲ့ ဗွိတိနျက ထုတျတဲ့ ကာကှယျဆေးတှဟော လုံးဝယုံကွညျစရာ မရှိတဲ့အတှကျ အီရနျနိုငျငံတှငျး မတငျသှငျးဖို့ အီရနျခေါငျးဆောငျကွီး Ayatollah Ali Khamenei က သောကွာနမှေ့ာ ပိတျပငျလိုကျပါတယျ။
အမရေိကနျနဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံတှကေ ကာကှယျဆေးတငျသှငျးမှုကို ပိတျပငျကွောငျးနဲ့ ဒီနိုငျငံတှဟော တခွားနိုငျငံတှကေို ထိခိုကျအောငျ လုပျလိုစိတျ မရှိဘူးလို့ မပွောနိုငျကွောငျးလညျး အီရနျခေါငျးဆောငျက တှဈတာမှာ ရေးပါတယျ။
အီရနျနိုငျငံမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ အကူးစကျခံရသူ ၁.၂ သနျးကြျောရှိပွီး ဒီရောဂါနဲ့ သဆေုံးရသူက ၅၆၀၀၀ ကြျောရှိနတောပါ။
သူ့ရဲ့ မဟာရနျသူကွီးဖွဈတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံက အရေးယူဒဏျခတျမှုတှေ ခမြှတျပွီး ဒီရောဂါအတှကျ ကာကှယျဆေး မရအောငျ အတားအဆီးတှေ လုပျနတေယျလို့ အီရနျက စှပျစှဲထားပါတယျ။ ဒီအရေးယူ ဒဏျခတျမှုမှာ အစားအသောကျနဲ့ ဆေးဝါးအတှကျ ကငျးလှတျခှငျ့ပေးထားတာ ဖွဈပမေယျ့ နိုငျငံတကာဘဏျတှကေတော့ ငှအေလှဲအပွောငျး ကိစ်စရပျတှမှော အီရနျပါဝငျလာရငျ လကျမခံ ကွပါဘူး။ ဆေးဖိုးငှပေေးခမြှေုကို အမရေိကနျဘဏျတှကေနေ တဆငျ့ လုပျဆောငျဖို့ အမရေိကနျဘကျက တောငျးဆိုခဲ့တာ ဖွဈပွီး အီရနျအနနေဲ့ ဒီငှတှေကေို သိမျးယူမှာ စိုးရိမျကွောငျး အီရနျသမ်မတ Hassan Rouhani က ပွီးခဲ့တဲ့ လမှာ ပွောပါတယျ။
Pfizer-BioNTech နဲ့ Moderna အပွငျ AstraZeneca-Oxford ကာကှယျဆေးတှေ တငျပို့မှုကို ပိတျပငျကွောငျး အီရနျခေါငျးဆောငျ Khamenei ကအမိနျ့ထုတျပွနျခဲ့တာပါ။ ဒီရောဂါဒဏျ အပွငျးအထနျ ခံစားရတဲ့ အီရနျဟာ ကိုယျပိုငျ ကာကှယျဆေးထုတျဖို့ ပွညျတှငျးမှာပဲ လူနဲ့ စမျးသပျစဈဆေးမှုကို ပွီးခဲ့တဲ့ လမှာ စတငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီကပျရောဂါ ဖွဈပှါးနတေဲ့ မနှဈက မတျလထဲမှာ ဒီကပျရောဂါအတှကျ အကူညီတှေ ပေးမယျလို့ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့က ကမျးလှမျးခဲ့ပမေယျ့ အီရနျရဲ့. ရနျဘကျဖွဈတဲ့ အမရေိကနျရဲ့ ရညျရှယျခကျြကို အယုံအကွညျမရှိဘူးလို့ ပွောပွီး Khamenei က လကျမခံပယျခခြဲ့ပါတယျ။
Pfizer-BioNTech ကာကှယျဆေး တသိနျးခှဲ အီရနျကို ပို့ဖို့ အမရေိကနျအခွစေိုကျ အီရနျသိပ်ပံပညာရှငျတှကေ စီစဉျထားပမေယျ့ Khamenei ရဲ့ ပွောကွားခကျြကွောငျ့ အခု ဖကျြသိမျးခဲ့ရတယျလို့ အီရနျလခွမျးနီအဖှဲ့က သောကွာနမှေ့ာ ပွောပါတယျ။
Disneyland ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ အစီအစဉ်
ရေနံတင်သင်္ဘောကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ တောင်ကိုရီးယား အဖွဲ့ အီရန်ကိုရောက်ရှိ
အီရန်မှာဖမ်းခံရတဲ့ မြန်မာသင်္ဘောသားများအခြေအနေ မြန်မာအစိုးရစုံစမ်းနေ
အီရန်သံမဏိလုပ်ငန်းနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကန်ဒဏ်ခတ်အရေးယူ
အီရန် မြေအောက်နြူကလီးယားစက်ရုံ တည်ဆောက်နေ
အစ္စရေးထောင်ချောက်ဆင်တိုင်း စစ်ဖြစ်အောင် ရန်မစဖို့ ကန်ကို အီရန်သတိပေး